जबर्जस्ती दशैं मनाउनै पर्छ र ? - Himalayan Kangaroo
जबर्जस्ती दशैं मनाउनै पर्छ र ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २१ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०२:४० |
दशैको सुरुवातमा गरिने नौ दिनको पूजा, जसमा देवी दुर्गाको आरधाना गरिन्छ । द्वैध चरित्र बोकेको हाम्रो समाजमा जहाँ नारीलाई कमजोरको सङ्ग्या दिइन्छ, यी नौ दिनमा भने देवी दुर्गालाई शक्तिकी देवीको रुपमा बुझिन्छ । यो अवधिमा के यी देवी दुर्गालाई नारी नै मान्दैनन् नेपाली पुरुष समाजले ? होइन भने,एउटी नारीको मूर्ती पुजन हुँदै गर्दा अर्की नारीमाथि प्रहार र दमन हुन्छन् किन ?
नारी कोमल हुन्छन् । यी आमा हुन् , सृष्टि हुन् । यहि कोमलतालाई नारीको कमजोरीपन मानिन्छ र हरतरहका प्रहार गरिन्छ । नौ महिनासम्म बच्चा गर्भमा राखी घुम्ने नारीलाई शारीरिक रुपमा कमजोर मानिन्छ । आफ्नो आत्मसम्मान गुमाएर, आफ्ना इच्छाहरुलाई तिलान्जली दिएर , परिवारको लागि, आफ्नाहरुका लागि जो बाँच्न सक्छे , त्यसलाई भावनात्मक रुपमा कमजोर मानिन्छ । महिनावारीको बेला कार्यलयको लागि त्यो रक्तस्राव र त्यो पिडाको बाबजुद दौडिने नारी,यो समाजको अगाडि कमजोर छे । मृत्युको मुखमा पुगुन्जेलको पीडा सहन गरि सृष्टि थाम्ने नारी, यो समाजको नजरमा सधै कमजोर छे ।
भनिन्छ , महिशासुरको कठोर तपस्याले प्रसन्न हुनुभएका भगवानले आशिर्वाद दिनुभयो कि, एउटी महिलाले मात्र तेरो बध गर्न सक्नेछन् । महिशासुर यो कुराले अति प्रसन्न भयो । किनकि उसलाई ढुक्क थियाो –एउटी कमजोर वयकी नारीले उसको बध गर्न कदापी सक्नेछैनन् । तर उसको त्यो कमजोर मानसिकताले हार्यो , एउटी नारी अथवा दुर्गाले त्यस दानवको बध गरिन ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि यस्ता निच दानव मानसिकताका व्यक्तिहरु छन् । दुर्गा देवीका नामका भजनहरु गुन्जिदै गर्दा , कति नारीहरुले चीत्कार छोडेका छन् होलान् । तर हाम्रो समाज भने मग्न छ,शक्तिकी प्रतीक देवीको नामको उपवासमा, आफ्ना वरिपरिका नारिहरुको उपेक्षा गर्दै । र, बिर्सिराखेका छन् कि,ती शक्तिकी प्रतिमुर्ती पनि कमजोर ठानिएकी नारी थिइन् ।
प्राकृतिक रुपमा सबै प्राणीको आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ । एउटाको विशेषतालाई अर्कोसंग तुलना गरेर निर्बल र बलियो छुट्टाउने मानसिकता नै कमजोर मानसिकता हो । कमसेकम यो दुर्गा पूजाले यति ज्ञान भरिदियोस । हाम्रा संस्कृति र धर्मका सहि कुराहरुलाई सहि तरिकाले मनन गरिऊन् ।
कुनै चाड पर्व मनाउँनु भन्दा अघि त्यसको महत्व र विशेषतालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । दशैंको कुरा गर्दा पनि यो मासुभात,मदिरा र जमराको मात्र चाड होइन । यो विशुद्ध नारी शक्तिको पूजन गर्ने नवरात्रीको समय हो । त्यसैले दशैं मनाइरहँदा यसको महत्वलाई बुझेर मनाउँ । न कि अन्धधुन्ध अनुसरण र देखावटी आडम्बरिपनले । म त भन्छु दशैंको महत्व नबुझ्ने पाखण्डीहरुले दशैं नमनाएकै वेश । किनभने जबर्जस्ती दशैं मनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।
अन्त्यमा कुनै पनि नारीलाई पिडाको त्यो सागरमा नडुबाउ ताकि उसले आफ्नो दुर्गा देवीको रुप धारण गर्न नपरोस । दुर्गा देवीले सबैको कल्याण गरुन् । नवदुर्गा दाहिने रहून् ।
Previousअष्ट्रेलियामा टेलिफोनबाट ठगी गर्ने गिरोहमा नेपाली भाषी पनि संलग्न
Nextअर्को महिनादेखि अष्ट्रेलियाले ४ थरिका नयाँ वर्किङ भिसा दिने
१ कार्तिक २०७४, बुधबार ०३:४१
देश भावनाले चल्दैन–जोयालाई फूलमाला होइन हत्कडी लगाऊ
२ भाद्र २०७३, बिहीबार ०४:०५
यसरी पूरा हुँदैछ नेपाली जनताको ६५ बर्षदेखिको सपना
२७ भाद्र २०७२, आईतवार १७:१७